MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့ 2.4.0 APK – ApkFarm
MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့ 2.4.0 APK
10.0	(1003)Games, News & Magazinesby Myanma Posts and Telecommunications
Description of MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့
လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေ့ စဉ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်မှ ရယူထားသော ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး နောက်ဆုံးရ ပြည်တွင်းသတင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ လူနေမှုဘ၀ အကြောင်းအရာများသာမက နည်းပညာသတင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ လိုတရအက်ပလီကေးရှင်း၏ သတင်းစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့နှင့် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သော လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် လိုတရဂိမ်းများကို လူကြီးမင်းတို့၏ ပျင်းရိဖွယ်ရာ အချိန်များကို ကုန်ဆုံးရန် ၀င်ရောက်ကစားနိုင်ပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်သော ဂိမ်းများအကြောင်းကိုလဲ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ထို့ပြင် MPT အသုံးပြုသည့် လူကြီးမင်းများအနေနှင့် MPT၏ ခေါ်သူနားဆင်တေးသံစဉ် နှင့် တခြားအပိုထပ်ဆောင်း ၀န်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်း ဖုန်းဘေလ်နှင့်ပွိုင့်များ စစ်ခြင်း ဖုန်းဘေလ်ထည့်ခြင်းများကို လိုတရအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လိုတရ အက်ပလီကေးရှင်းကို MPT ကွန်ယက်ဖြင့် ဒေတာအခမဲ့ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒေတာကုန်ကျမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုပဲ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ လိုတရအက်ပလီကေးရှင်းကို ခုပဲအသုံးပြုလိုက်ပါ။
လိုတရ Facebook Page: https://www.facebook.com/lotayaportal/
It seems to me that in order to fulfill the needs of daily လိုတရ Action preparedanew application once again.
The media were collected from more than thirty popular Latest News, political, Business, entertainment,0topics of living and technology news in real time လိုတရ Action News of the application will be able to read through.
You are familiar with the ease and simplicity of လိုတရ games until the end of time are likely to see your lazy0Reading can play popular games.
In addition, MPT You may wish to use MPT to listen to music and other additional services0phone bills and purchasing Points through phone ဘလျေ လိုတရ available via an application.
လိုတရ an application used for free by the MPT network data.
The cost data anywhere, anytime without having to worry လိုတရ using an application thing.
0 Web site: https //: lotaya.mpt.com.mm
News UX improvement and minor bug fix
App Information of MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့
App Name MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့
Package Name mm.com.mptvas.lotayamm
Rating 10.0	( 1003 )
Tags: MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့ Apk
Related Posts of MPT Lo Ta Ya-သတင်း၊ ဂိမ်း၊ ဗေဒင်များကို ဒေတာအခမဲ့
RRI Play 4.0.0
Flipboard: News For Our Time 4.2.7
Homesnap Real Estate & Rentals 5.20.74
Hide Online - Hunters vs Props 3.3.0
World Best Cooking Recipes Game 4.0
香港01 - 新聞資訊及生活服務 3.18.0
North Connected Home Bulb 2.1.1
Verdad o Reto 1.6
More from Myanma Posts and Telecommunications
MPT SIM SWAP 1.0.5.0
Uploaded January 15, 2019 02:17
MPT4U 3.3.3
Uploaded December 27, 2018 05:17